CUA : fifaninanana tsikonina ho an’ny ankizy | NewsMada
CUA : fifaninanana tsikonina ho an’ny ankizy
Par Taratra sur 05/05/2018
Manomana « Tsikonina 2018” na fifaninanana mahandro sakafo malagasy ho an’ny ankizy ny kaominina Antananarivo Renivohitra. Misy ny fanentanana ny ankizy rehetra tsy ankanavaka eo anivonin’ny boriborintany enina mba handray anjara mavitrika amin’izany.
Efa manomboka ny fisoratana anarana ary hifarana ny faran’ny volana mey 2018 izay atao eny anivon’ny boriboritany misy azy avy na etsy amin’ny Stade Mahamasina rihana voalohany varavarana faha2 ao amin’ny departemanta misahana ny kolontsaina sy ny fiainam-piarahamonina.
Ny ankizy 8 taona ka hatramin’ny 12 taona no afaka mandray anjara. Mamorona vondrona iray misy ankizy dimy (lahy sy vavy).
Hatao ny 6 jona izao ny fifanintsanana ny ao amin’ny boriborintany faharoa sy fahefatra. Hotontosaina ny 13 jona ny avy ao amin’ny boriborintany fahadimy sy fahenina ary ny 20 jona ny avy ao amin’ny boriborintany voalohany sy fahatelo.
Hatao ny 29 jona kosa ny famaranana ny fifaninanana izay hatao ao Mahamasina.
Tanjona kendren’ny kaominina Antananarivo Renivohitra amin’ny fanaovana tsikonina ny mba hanomezana lanja ny akora vita malagasy sy ny fahandroana malagasy mba tsy ho very ny soatoavina maha Malagasy ary indrindra ny firaisankina ho an’ny ireo ankizy. Nanomana loka goavana ny kaominina miara-miasa amin’ireo mpiara-miombon’antoka ho an’ireo ekipa telo voalohany.